"DFS waa inay qabataa shir ay yeelanayaan dowlad goboleedyada maalmaha harsan ee Janaayo" Shahat. - Axadle
“DFS waa inay qabataa shir ay yeelanayaan dowlad goboleedyada maalmaha harsan ee Janaayo” Shahat. – Axadle
Ururrada bulshada rayidka ah waxay soo saareen dhowr xallinta khilaafaadka la heli karo ah si looga hor dego waqtiga doorashada, oo lagu celiyo sannadka 2020.
Qoraal ka soo baxay Beesha Caalamka ayaa lagu fulinayay arrimo dhowr ah oo u baahan in looga baxo dowlad, halka musharixiinta kale iyo xisbiyada ku tartamaya doorashada si aysan u imaan dadaallada hore.
Guddoomiyaha SONSA Cismaan Muxudiin Shaatax wuxuu soo dhoweeyey dadaal kasta oo lagu doonayo in lagu heshiisiiyo dhinacyada siyaasadda ku kala qeybsamay, wuxuuna dhiirrigeliyey dadaallada socda.
“Doorasho wadajir ah waa in laqabtaa taas oo dhamaan maamul goboleedyada ay kaqeyb galaan iyadoo lagu saleynayo heshiiskii Sebtember 17, 2020. Dhammaan dhinacyada heer federaal, heer gobol iyo kuwa mucaaradka waa inay ilaaliyaan xasiloonida. Ajendaha shirkaan waa inuu noqdaa mid cad. Si looga gudbo madmadowga jira. waxaana la qabanayaa Janaayo 202. ” Sidaa ayuu yidhi Shatax.
Ururada bulshada rayidka ah waxay sameeyeen dadaalo ay ku dhexdhexaadinayaan Dowlada Federaalka, Musharaxiinta, Hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland oo ku kala aragti duwan qaabka loo wajahayo maamulka doorashada iyo dhiibista Gudiga.
Xubno ka socda Ururada Bulshada Rayidka ayaa la kulmay Midowga Musharaxiinta, qeybaha kala duwan ee Bulshada & Raiisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble si loo xaliyo khilaafka ka taagan shaqsiyaadka qaar ee ay soo gudbiyeen Gudiga Dowlada.